Hey Hey Goodbye wordpress.org
Ike 1, 2013 site na rịọ 44 Comments
N'ihi ya, ogologo, anyị bụ ndị suckers… 🙁
Afọ anọ mgbe aga WordPress repository, na 189,795 downloads ukperedem, Transposh a ga-ahapụ ndị wordpress.org repository.
O doro anya na, niile na oge a anyị Ngwaọrụ nwere njikọ anyị na saịtị, ma ọ bụ ezie na ọ bụ ike wepụ ya, nke a bụ megide wordpress.org ntuziaka.
Nke a bụ guideline na anyị na-enweghị ike ịnabata, anyị kwere na anyị kwesiri n'aka anyị ọrụ. Ọ bụghị ihe na-erughị twitter, facebook, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ maara nke ọma ụlọ ọrụ igbo mkpa ọzọ wijetị si n'ebe.
Anyị na-enweghị ike ịnabata eziokwu ahụ anyị ngwa mgbakwunye ẹfep na-enweghị amamọkwa, na-enweghị ihe ọ bụla oge ukpụhọde, nri nke elu igwe.
Anyị na-enweghị ike na-anabata nke ahụ ozi na anyị biputere na ngwa mgbakwunye Forum ẹfep naanị n'ihi moderators adịghị amasị ha, ma ọ bụ kpebie na ha megide iwu na ha kere onwe ha. Iwu ha achọghị cheekwa ozo.
Ha na-efu na-eme ka ihe ọ bụla na mkpebi ha na-amasị, mgbe nile, ya na ha mba ha iwu. -Apụghị ileghara anya na, luckily-ezuru anyị na-enweghị ga-anakwere ha.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mkpesa, adịghị mkpesa a, na-agbalị na mkpesa na forums, ma m maa amụma bụ na ị ga na-moderated, wordpress.org abụghị ọchịchị onye kwuo uche, ma ọ bụ ihe ọ bụ a GPL Dabara na saịtị, ihe niile ga-enwerịrị free, na-eri, na ikwu okwu, nke ahụ bụ ihe mere na ị nwetara tọn nkwarụ plugins na na-eje ozi dị ka nkwalite na pro version. Nke a bụkwa ihe ha tụrụ aro ka anyị na-eme na Transposh. Ma na anyị adịghị amasị ya, ọ dịghị otu onye bit.
Ọ bụrụ na a na-esote version ga-ga-uploaded ahụ na saịtị, ọ ga-abụ a nkwarụ version, (na-enweghị ihe ọ bụla njikọ ebe a, n'ezie) ma ọ bụghị ihe ndị kasị usable version. Ọhụrụ version (abụghị nkwarụ) ga-eje ozi ebe a na download page. Nke anyị ga-ugbu a, nwere ịgbakwunye mmelite usoro.
Na-eche na iji kwurịta nke a kwuru ebe a.
N'ihi ya, ogologo wordpress.org, na ekele maka ihe niile azu.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: wordpress.org
Ike 1, 2013 na 11:42 na
nke ahụ bụ ikenenke. Ị bụ onye ihe mere m wee WordPress. Ana m n'ezie edikpu ke WordPress moderators. Ị kwesịrị ọzọ dị otu obere njikọ.
Ike 1, 2013 na 3:48 obi
Ọfọn, M atụ anya ka ị na-enwe ike ịnọgide na ọ na-agba ọsọ.
Ma eleghị anya, i nwere ike na-amalite otu mgbasa ozi na-agwa WordPress anyị niile na-adịghị nnọọ obi ụtọ. M malitere iji WP tumadi n'ihi na gị na ngwa mgbakwunye.. ọ dị nnukwu uru maka SEO & njikọ on Google. Na na a webmaster maka 17 yrs na m ịkwụsị iji Dreamweaver & ịgbanwee WP.. Ọ bụ n'ihi na Transposh. 🙂
Ike 1, 2013 na 5:43 obi
Daalụ maka ụdị okwu, i nwere ike iri ihe a nke WordPress forums, ka moderators mara, ma Ekwetaghị m na nke a ga-enyere ọtụtụ.
M maa amụma ahụ na-abụghị WordPress osisa ga-abịa elu nke ukwuu ngwa ngwa ugbu a,.
Ike 1, 2013 na 5:34 obi
Ha ha dị nnọọ mwute, ebe anyị nwere ike ide akwụkwọ mkpesa gbasara??
Ike 3, 2013 na 8:27 obi
Ị nwere ike ide akwụkwọ mkpesa gbasara ke WordPress forums, kama m na-echeghị na onye ọ bụla ga-ege ntị.
Ike 1, 2013 na 10:48 obi
Ọfọn na nke a bụ n'ezie ihe ọjọọ ozi. M chere na WordPress otu mesoo ngwa mgbakwunye mmepe dị ka nke a. Ha chọrọ iji cheekwa ozo ha omume. Dị ka i kwuru na, na njikọ ga-ewepụ ma na e nwere ike mere ruo ogologo oge ugbu a,. Gịnị bụ nsogbu? Gị ihe karịrị nti m ji gị ngwa mgbakwunye na otutu nke m na saịtị, a emeela ka m na otutu mmezi okporo ụzọ yana mụbara saịtị akara ukwu ke Google. M n'azụ unu a.
Child Themer na-ekwu,
Ike 2, 2013 na 9:09 obi
Nke ọma na dị ka jọgburu. Anaghị m nweta ihe buru ibu ndibiat bụ. Obi dị m ụtọ na ị na-ka àjà ihe nkwụnye dị ka m na-eji ya na mmadụ ole na ole nrụọrụ weebụ.
Francois Lachance na-ekwu,
Ike 3, 2013 na 3:16 na
WordPress bụ egwu,naanị ihe na-eme ka WordPress ọma bụ obodo nke Onye Mmepụta dị ka gị Ihọd si,onye na-etinye mgbalị dị ukwuu n'ihi na ọ dịghị ego na obere recognition.You Ihọd mere kemmenyeujo ọrụ a ngwa mgbakwunye na-atụ anya na ị ga-anọgide na-eme otú ahụ ọbụna mgbe that.Best nke chioma
Ike 3, 2013 na 3:34 obi
Ekwenyere Francois. WordPress bụ egwu na-enweghị mmepe dị ka gị.
Ike 4, 2013 na 2:01 obi
m na-eche na nke a WordPress iwu bụ gbochie google penguuin penality zọpụta saịtị a si kwuo ugwo.
Ike 4, 2013 na 2:20 obi
Na-akpali echiche, kama m na ihe anyị na-ezi ike aka google-enweghị wordpress.org patronization, na – ọ na-ekwe ka nwere njikọ gị wijetị, ịjụ facebook, twitter, ShareThis(quickest page ka n'usoro 10), na ọtụtụ ndị ọzọ
Ana kelly na-ekwu,
Ike 5, 2013 na 9:44 obi
M mere ndo-anụ m na a na-eji gị na ngwa mgbakwunye isua agaghị m hụrụ ya n'anya….
M atụ anya ka ị na-nọgide na-enwe ya.
Ike 6, 2013 na 12:42 obi
M ga-achọ ịgwa gị na m kpam kpam akwado mkpebi gị 🙂
Nọgidenụ na-mkpatụ dudes 😉
Ike 8, 2013 na 2:43 na
N'ihi na ihe ndekọ, ị na-ahụ n'ụzọ zuru okè nke ọma kwere ka nwere njikọ gị wijetị. Iwu na WordPress.org na ikwu na njikọ ga-enwe pụọ na-njikọ, ọ bụghị nwepu aha otu.
Asị gị nnọọ ka gị na ngwa mgbakwunye na WordPress.org mgbe ị na-ekpebi na ị chọrọ noro site na otu na-achị.
Ike 8, 2013 na 11:35 obi
M mma na ọnọdụ dị ka ọ dị ugbu a. M na-eji nwere “nganga powered by WordPress” m ibe, nke mmadụ na mberede-abịa na nke isiokwu m emewo (Echere m na ndabara gburugburu nwere ya oke, ghara ịpụ na-na). Nke a bụ agaghịkwa ahụ, n'ihi na abụ m nke ukwuu na-erughị mpako nke.
Ọ bụrụ na a na-achị ga-reconsidered (i nwere ike ịgụ ihe ole na ole ndị ọrụ kwuru ebe a, banyere atụ anya na a, ịbụ ndị dị mma na nke a, N'ikwu kpọmkwem banyere, wdg) M ga-cheekwa ozo.
M ike ikwere na-emechi a ngwa mgbakwunye na ihe kemgbe ahụ n'ihi na 4 afọ, a abụghị gaping nche onu bụ ihe ọjọọ edinam. Ọ bụ naanị otu ọnwa gara aga m a bit na-anọghị n'ịntanetị, na-eleghị anya enwebeghị ike ijikwa a mma mgbe. M na-atụ aro ka ị were gị oge cheekwa ozo kwuru amụma (nye a mara, ụfọdụ ihe ezi uche timeframe, ihe ọ bụla). Nke a bụ mgbe ndị dị otú ahụ a pụrụ iche nke, na a chọrọ ihe ndị dị otú ahụ ike.
Otú ọ dị, ekele maka njikere, na oge, olileanya anyị Aga izute ke ini iso ke mma usoro.
Mr green na-ekwu,
Ike 8, 2013 na 12:50 obi
(Asị gị nnọọ ka gị na ngwa mgbakwunye na WordPress.org mgbe ị na-ekpebi na ị chọrọ noro emi akpan akpan ke ibụmede.)
ekele Otto na-ahụ ma dokwuo anya
Ofer na ozi ọma anyị gị n'anya(anyị) ngwa mgbakwunye
Transposh ga-adị ndụ
Seks Bloomfield na-ekwu,
Ike 8, 2013 na 10:20 obi
Ndewo, M nnọọ chọrọ ikwu na-ekele gị nke ukwuu maka transposh ngwa mgbakwunye, Ọ bụ ihe magburu onwe ya ngwá ọrụ, M ibudata ya na gị na saịtị, m ji nganga na-egosipụta gị njikọ.
M ike ịghọta ihe mere i e kpoputara, dị ka ọtụtụ ndị na plugins nwere njikọ nke saịtị na ha, ọ dịghị ihe na-ezighị ezi a dị ka ọ bụ na ngwa mgbakwunye, N'ihi ya, i kwesịrị ọ dịkarịa ala na-njikọ ya.
Niels Jacob na-ekwu,
Ike 9, 2013 na 10:56 na
Daalụ maka ọrụ gị – M obi ụtọ gị na ngwa mgbakwunye, m atụ anya ka ị ga-azụ WordPress anya. Ka ọ dịgodị, kedu ka m imelite ihe n'uju version? (Achọrọ m ka ndị ọzọ na wijetị ka nke ndabere) Ka m kwesịrị uninstall na WP ngwa mgbakwunye, budata wụnye ngwa mgbakwunye gị download ngalaba? Ma ọ bụ ga-na ichicha ihe niile m dị ugbu a translations?
Ike 9, 2013 na 1:05 obi
Nke a ga-ichicha gị translations, n'ụzọ ị na-atụ aro ga na-arụ ọrụ. Ọ dị ụzọ ọzọ doo
1. Nweta nkwalite site na wordpress.org ka version 0.9.3
2. Gaa na ntọala na-elele “nweta nkwalite ndị zuru version”
3. Ịlele maka upgrades ọzọ (i nwere ike inwe ịmanye nke a)
4. Nweta nkwalite ndị zuru version (ugbu a 0.9.3.1)
Ike 9, 2013 na 2:23 obi
Daalụ nke ukwuu – M ji ikpeazụ gị elo, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu!
Ike 9, 2013 na 2:45 obi
M mmadụ na mberede kwalite na 0.9.3 via WordPress repository, ma ugbu a, na-efu ọkọlọtọ. Ya mere, uninstalled na ebudatara version gị na saịtị. Ngwa mgbakwunye ga arụnyere, ọ na-ekwu adịghị irè plugins okụt. Ugbu a, m na-efu gị translation ngwá ọrụ anyị na saịtị.
Biko nyere aka….
Ike 9, 2013 na 3:18 obi
Ga elele ka a, Otú ọ dị, biko na-agụ m na ndị ọzọ ikwu na otú e si nweta nkwalite site repository.
Ike 9, 2013 na 3:29 obi
Ndewo, ekele gị azịza. Mgbe m enyocha azụ gị download na peeji nke m hụrụ ka 0.9.3.1 njikọ. M ihichapụ faịlụ site na 0.9.3 ma wụnye 0.9.3.1. Ọ na-arụ ọrụ ọma ugbu a,, na ọkọlọtọ weghachiri eweghachi. Daalụ nke ukwuu, m m ndo maka ọnọdụ na WordPress.
Anyị website gbasara Okwu Chineke gburugburu ụwa, m chọrọ ka ị mara na gị translation engine bụ ihe na mkpụrụ obi na-azoputa.
Sushyant Zavarzadeh na-ekwu,
Ike 13, 2013 na 5:21 obi
WordPress ike ịbụ n'ikuku ana enweta n'otutu asụsụ CMS na-enweghị transposh! e nwere ọtụtụ translation plugins maka wordpress ma ha niile bụ ndị na-abaghị uru 😀 m nnọọ obi ụtọ n'ihi na eji Transposh ma na-enyere maka Peasia asụsụ support. 🙂
Ike 18, 2013 na 11:38 obi
hey Ofer, ya ị maara onye 🙂
Dị ka ị maara na m na nke e ofu mgbe m reuploaded na ofu version ị na-etinye na ihe nkesa na n'oge ahụ, n'aka otú ma ọ bụ gịnị mere, ma ọ ofu ya.
Ugbu a, m na-ahụ ihe ị na pụtara na gị na ngwa mgbakwunye ịbụ n'ebe WordPress, n'ezie mwute, M na-eche ma na otu kwesịrị imezi izute ọkara otú a nghọtahie, n'ihi na onye ọ bụla ji n'ihi.
M nnọọ kwalite nke ọhụrụ version, mere nnọọ otú ahụ mma, ga-nyochaa stats na okporo ụzọ na-enwe olileanya na aga na nke right resurface.
Daalụ maka idebe Transposh ndụ.
Ike 19, 2013 na 12:04 na
Obi ụtọ na ịnụ gị nsogbu hapụrụ, na-achọ inwere ị chioma n'ọdịnihu 🙂
Ike 27, 2013 na 9:18 na
Na-ekele gị nke ukwuu maka Transposh nkwụnye. Na WordPress iwu bụ ngosi. M kpamkpam gị akụkụ. Kwalite ihe n'uju version na nganga na-egosipụta “sụgharịrị site Transposh” njikọ.
Gị nkwụnye kacha adaba iji.
June 24, 2013 na 10:37 obi
bụ ngwa mgbakwunye ka na-arụ ọrụ na okwu pịa website onye ama arụnyere na ngwa mgbakwunye, ị nwere ike nye download njikọ site na un ukara repo…?!
June 24, 2013 na 10:40 obi
Ndị download ke WordPress repository na-edu ebe a, ị nwere ike ịlele download full version, ma na-eme nweta nkwalite, Nhọrọ ị nwere ike ịga leta download na peeji nke ebe.
June 26, 2013 na 2:15 obi
Nbudata update si http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
Download okpu. Nso
June 26, 2013 na 2:29 obi
Ihe gị na ihe nkesa na-eleghị anya igbochi nke a, biko gbalịa na nbudata na iji aka tinye ma hụ na ị na-enwe ike ịnweta faịlụ
August 15, 2013 na 7:59 obi
Ekwenyere m na. WordPress Staffers, dị nnọọ ka m na ọfiọk, na-eme n'ezie nnọọ ihe ọjọọ ọrụ.
Ha hichapụ Forum zara naanị n'ihi na ha chọrọ ịbụ ndị mbụ’ na iza ma ọ bụ ikpebi na ị zara ndị zuru ezu (enwere m ike inye gị 2 aha, ma amasị m ghara) ma na-achọ na-enye ha ụgwọ ọrụ site na-ejikọ ha ọkachamara profaịlụ (ee ..). Nke a bụ naanị nwa n'akụkụ WordPress, na-ele anya na nke a ga-agbanwe..
Sachin Obosara na-ekwu,
August 20, 2013 na 2:28 obi
Mara ihe ị na-eche banyere agbajikwa plugins nkwado pro nsụgharị. Otu obiọma okwu maka ya – pathetic.
Uche ọkacha mmasị gị na saịtị. Ga-akara. Fantastic nsụgharị.
Mgbe gị na nsụgharị nile bụ ọbụna 2nd kacha mma.
August 20, 2013 na 10:34 obi
Daalụ maka ụdị okwu
December 20, 2013 na 4:31 obi
Ọnụego ọrụ na unu emewo a nkwụnye bụ ịtụnanya.
M na-arụ ọrụ nke na-abụghị uru ahụike otu m ike ịgwa unu na gị nkwụnye enyeworo anyị kpọtụrụ anyị Hispanik bi.
Dị ka aga ma tinye anyị translations bụ kediegwu.
Maịl ndị enyi m… ọ bụ naanị nnukwu ihe ọjọọ otú WP mere ka ọ siri ike n'ihi na ị na-akwalite onwe gị.
M ga-ndidọ ị, n'ezie. Okwu ọnụ bụ mgbe ụfọdụ, ndị kasị mma nkwalite.
Bogdan Oké Ifufe na-ekwu,
December 31, 2013 na 2:47 na
Biko anaghị ahapụ a n'ọhịa ma na-edebe Transposh ndụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị nwere ike ikwu banyere na-eme ka ọ na uru m ga-enyere gị echiche banyere.
Ị chọrọ WordPress website na-akwalite ọrụ gị.
Nọgidenụ na nchekwube na-elu ka anyị nyere gị aka.
Daalụ maka ịrịba ama ọrụ na-eme ka gị na ngwa mgbakwunye otu n'ime ndị kasị mma m hụrụ ebe ọ bụ na … mgbe.
January 15, 2014 na 6:45 obi
Aga m obi ụtọ ịkwụ ụgwọ ịnọgide na-akwado ya.
March 17, 2014 na 11:03 obi
hey, Na na na gị kwuru na WP.org ebe gị na ngwa mgbakwunye nwere otu kpakpando fim bụ maka. Gị ahuhu maka ihe ị na-eme na-eṅomi ndị a kwuru. Kepp @ ​​ọ.
James Hilliard na-ekwu,
June 2, 2014 na 4:19 obi
Na Mods na WordPress kwesịrị n'ezie cheekwa ozo a travesty ichewe. Ka ị tụọ… KWA share button bụ jikọta na onye ọzọ na saịtị. Na facebook plugins kọwaa otú ahụ… OTÚ amaja unu Gbalịa n'otu, dịrị n'otu N'ỤWA abụghị Google Ịsụgharị EVERYPAGE!!!
July 10, 2014 na 8:12 obi
:Na :Na :Na :Na :Na
The Bee na-ekwu,
February 6, 2015 na 4:28 obi
Okorobịa “ebube ọrụ!” M gị n'anya plugin na m gị n'anya àgwà guzo ruo ihe ziri ezi!
WordPress ga-wordpress na-enweghị egwu plugins dị ka gị. Dị ka i kwuru Facebook, Jikọtara Na, Twitter, Google…ha niile ga-esi na-njikọ azụ mere ị?
M 100% n'azụ gị, M na-egosipụta gị plugin m na-egosipụta na gị njikọ! Ebe E Si Nweta kwesịrị ka e nye ebe Ebe E Si Nweta bụ n'ihi. Ị ndị mara mma iji na-ka ọtụtụ ndị na-eji gị plugin na unu kwesịrị ọ bụla bit maka ya! Ọ na-juru m na ndị mmadụ na wordpress nwere ike ghara ịghọta ọrụ ike na-aga n'ime ihe dị ka nke a. Ị ga na-eche nke ndị niile, ha ga-aghọta na ọtụtụ. Ka emechara, WordPress na-erite uru na ọrụ gị, niile WordPress ọrụ na-erite uru site na ọrụ gị, ya mere…mere bụghị gị? M ga-nganga na-gị plugin na m na saịtị na njikọ azụ! M ga-agwa ndị niile na ụmụ akwụkwọ m ime otu ihe ahụ. Ị bụ ihe kwesịrị ekwesị. Long ndụ ochichi onye kwuo uche!!!! 🙂
February 22, 2015 na 7:29 obi
Kpamkpam na-ekweta na ihe niile ị na-ekwu, The Bee! M hụrụ n'anya Transposh àgwà kwa …na m maa a n'anya amamiihe plugin nke m na nnọọ arụnyere na na na ọ na-arụ ọrụ mara mma!
BTW, Site Transposh, Apụghị m ịhụ ihe ọ bụla onyinye Paypal button bụla?? Echere m na ị ga-achọ otu 🙂 …na ekele nke ukwuu maka mara mma plugin!
ma ọ bụ najeb na-ekwu,
February 28, 2015 na 11:28 na
WTF ikenenke. a plugin bụ ihe kasị mma maka m m gnna na-eji ya na agbanyeghị ị ụmụ okorobịa Na mkpa wordpress, na ị na nri ha kwesịrị appreiate Ua ọrụ na ha na aka ị tupu ha na-eme na, WTF n'ezie ọjọọ
Itan Sanabria na-ekwu,
June 5, 2015 na 9:02 obi
Ọma na nke a na eme nzuzu. M n'ezie dị ka nke a nkwụnye! N'ihi na a ụlọ ọrụ na-achọ mụbaa n'ime Latin America, Transposh ghọrọ akụkụ dị oké mkpa nke atụmatụ. M ga-eji ọṅụ kwụọ ụgwọ ya!
Nnọọ na-akụda, WordPress!!!